Dhallaankii Lagu Dhibaateeyay Guryaha Meeleeynta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruurtaa kamida dadyoowga loogeeysto xadgudubyadda isku galmoodka
Dhallaankii Lagu Dhibaateeyay Guryaha Meeleeynta
Dhallaankii dhibaatooyinka loogu geeystay guryaha meeleeynta
Publicerat fredag 11 februari 2011 kl 14.05
Sannadkii 2006 ayay dawladdu u xil-saartay Kerstin Wigzell ka soo baaran-degidda sidii mag-dhow loo siin lahaa kummanaanka dhallaan ee dhibaatooyinka iyo tacadiga loogu geeystey guryihii ey ku soo bar baareen ee lagu meeleeyey, waxa loo yaqaanno fosterhem.
Kerstin Wigzell ayuu wasiirka dhallaanka iyo waayeelka Maria Larsson u xil-saartay sidoo kale ka soo baaraan-degga sidii hab xafladi ku dheehan tahay dawladdu ugu aqoonsan lahayd raali-gellinna uga bixin lahayd iyadoo weliba dawladdu dusha u ridaneeyso dhibaatooyinka loo geeystay dhallaankaa. Sida ay wasiirraddu u sheegtay wargeeyska DN in dawladdu raali-gelin siin doonto dhallaankaa.
Baaraha dawladda ayaa baaritaankeeda ku soo jeedisay in dhallaanka dhibaatooyinka loogu geeystay guryaha lagu meeleeyey intii u dhaxeeysay sannadihii 1920 iyo 1980 midkiiba loo xukumo magdhaw gaarsiisan 250 000 oo koronka iswiidhishka, islamarkaana loo qabto xaflad ay ka soo qaeyb galaan xubno dawladda matalaya si loo qirto dembiga loo geeystay loogana raali-geliyo. Kerstin Wigzell, baaraha dawladda:
- Waxaan soo jeedinay in la siiyo 250 000 oo magdhow ah ciddii shuruudahaa buuxisa. Magdhawgaasi maaha mid dib ugu soo celinaya dhibaatooyinkii soo gaaray caruurnimadoodii iyo saameeyntii ey dhibaatooyinkaasi noloshooda dabadeed ku yeesheen, hase yeeshee hadii la eego xeerka magdhawga ee dalka u degsan waa mid ka hooseeya magdhawga aan ku talinay.
Baaritaanka shalay faraha loo geliyay wasiirka dhallaanka iyo waayeelka Maria Larsson, ayay degmada Borlänge ahayd degmadii ugu horeeysay dalka ee raali-gelin siisa dhallaankii carrigaa dhibaatooyinka loogu geeystay yaraantoodii. Lena Angberg, waa madaxa laanta bulshada ee degmada Borlänge.
- Waxaan dareemay in aanay degmada Borlänge jirin wax ay sugto. In dadyoowgaa lala kulmo waa muhiim. Waxaan u fakaray sidan: Dhacdooyinkii aysan bulshadu arag kolkii dhibaatooyinkani dhacayeen, waa in bulshada maanta aragtaa.
Birgitta Palén, waxay ka mid ahayd dhallaankii lagu meeleeyey guryaha eyna dhibaatooyinku ka soo gaareen. Birgitta Palén ayaa sannooyinkii dhaxeeyey 1949 till 1963 lagu meeleeyey toban goobood oo kala duwan. Dareenkeeda mar ay ka warameeysay waxay tiri:
- Waxaan oran karaa in xaaladaydii koriimo ay i qaab gedisay, muddo ayayna igu qaadatay inaan caadi ku so noqdo.